सय रुपैयाँ तिरेर फिल्म हेर्ने हैसियत नभएकाहरुले छक्का पन्जाको उछितो काटिरहेका छन् — Motivate News
Posted on January 24, 2017 by motivate news
काठमाडौँ – म खास्सै चलचित्र हेर्ने र त्यसका प्रति कुनै टिप्पणी गरिरहने मान्छे त होइन तर पनि पछिल्लो समय मैले हेरेको चलचित्र छक्का पन्जा प्रति सामाजिक संजालमा आइरहेका केही टिप्पणीहरु प्रति मन साह्रै असहमत भएकाले केही लेख्नै मन लाग्यो । हलमा रिलिज भएको १०० दिनसम्म चलचित्रले दर्शकको राम्रो साथ पायो । एक पटक हेरेकाले कयौँ पटक फेरी हेरे र हेर्नका लागि सिफारिस गरिरहे । सायद साह्रै मन परेका कुरा नै अरुका लागि पनि सिफारिस गरिन्छ मेरो बुझाइमा ।
नेपाली चलचित्रको इतिहाँसमै धेरै रेकर्ड तोड्न सफल चलचित्र छक्का पन्जा यूट्यूवमा रिलिज भएसंगै राम्रा भन्दा नराम्रा प्रतिकृयाहरु धेरै आइरहेका छन् । यही विचमा चलचित्र पाइरेसिको आरोप लागेका एक यूवाले आत्माहत्या गरेका छन्, यो आत्माहत्या नभएर हत्या भएको चर्चा पनि सुनिन्छ । खैर, यो कुरा अनुसन्धानको विषय हो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै होला । अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य बाहिर आओस, दोषीले कडा कारवाही पाओस यो सबैको चाहाना र कामना छ ।
ति यूवाको रहस्यमय मृत्यू पछि धेरैको आक्रोसकोे निशाना बनेका छन् चलिचित्र निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरी । यदि कलाकार गिरी प्रतिको व्यक्तिगत रिस चलचित्र छक्का पन्जा प्रति पोखिएको हो भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ । व्यक्तिगत हिसावमा मलाई पनि दिपकराज गिरी उत्ती निको नलाग्लान् तर मैले उनी प्रतिको रिस चलिचित्र प्रति पोखेँभने त्यो जति अन्यायको विषय अरु हुन सक्दैन भन्ने मेरो निजी बुझाइ हो ।
विशेषत यूट्यूवमा चलचित्र हेरेपछि आएका केही साझा प्रतिकृयाहरु विदेशमा रहने सबैका श्रीमतीहरु विग्रीएका हुँदैनन्, यो चलचित्रमा कुनै कथा छैन, यसमा अभिनय छैन, यस्तो फिल्म त म एक घण्टामा तयार पारिदिन्छु आदि…… । यी सबै प्रतिकृयाहरु हेरिसकेपछाडी केही कुरा भन्नै मन लाग्यो । हो सत्य तितो हुन्छ तर स्विकार्नुको विकल्प हुँदैन । छक्का पन्जा यूट्यूवमा हेरेर कालो प्रतिकृयामा उत्रिनेहरुलाई मेरो रुखो जवाफ छ, जसले यति तल्लो स्तरमा गिरेर नकारात्मक प्रतिकृया दिइरहेका छन तिनिहरु हलमा गएर सय रुपैयाँको टिकट काटेर फिल्म हेर्ने हैसियत नभएका हरु हुन ।
रह्यो सवाल विदेशमा बस्ने सबैका श्रीमती विग्रेका हुँदैनन्, हो विदेशमा बस्ने सबैका श्रीमती विग्रेका छन् भनेर चलचित्रले कहाँ भनेको छ ? यो प्रतिकृया दिनेहरुले एक पटक आफ्नो मनको दोषि चस्मा निकालेर हेरौँ । चलचित्रले समाजको यथार्थ केही प्रतिनिधी घटनालाई लिएको हो । आजकाल चलचित्रमा देखाइए जस्ता घटनाहरु बग्रल्ती घटिरहेका छन् हाम्रो समाजमा । के यो कुरा झुट हो भन्ने प्रमाणीत गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ?
अनी सवाल छ यसमा कथा छैन् अभिनय छैन रे । अनी चलचित्रमा तिहाँस्दा हाँस्दै रुवाउने अनी रुँदा रँदै हँसाउने समाजका यथार्थ प्रस्तुतीलाई यस चलचित्रमा कथा छैन भन्ने महानुभावको भाषामा कस्तो कुरालाई कथा भनिन्छ बुझ्न पाए हुन्थ्यो ।
कुरा यस्तो पनि सुनियो यस्तो फिल्म त म एक दिनमै तयार पार्नसक्छु, हाहाहा…….. साह्रै हाँसो लाग्छ । आफू पनि नगर्ने अरुले गरेको पनि देखि नसहने प्रबृतिलाई नेपालमा के भनीन्छ रे …… सबैलाई थाहै छ । यस्ता फिल्म एक दिनमै बनाउन सक्ने मनुवाको साँच्चै खाँचो छ नेपालमा । मलाई लाग्छ यो चलचित्र हेरेपछि नराम्रा प्रतिकृया दिनेहरुनै यो फिल्म सबैभन्दा धेरै मनपराउने मान्छेहरु हुन् ।
केही मानिसको स्वभाबै अर्काको अस्तित्व नै स्विकार नगर्ने प्रबृतिको हुन्छ अनी चलचित्र हेरिसकेपछि साह्रै मन परेर छटपटीमा मनको अमिलो पाखेको जस्तो लाग्छ । ति अनुहारहरु ख्याल गर्दै गरौँ यसपटक चलचित्र हेर्न हलसम्म पुग्ने कष्ट उनीहरुले गरेनन् । दिपक दिपाले निर्माण गर्ने अर्को चलचित्र रिलिजको फस्ट डे, फस्ट सोमा हातमा टिकट लिएर फिल्म हेर्नका लागि वेग्र आतुर ति अनुहार देख्न पाइहोस यहि कामना…..। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो । यसमा असमत हुने छुट सबैलाई छ किनकी नेपालमा लोकतन्त्र छ ।
Posted in मनोरञ्जन, लेख रचना | Tagged Chhaka Panja, Dipak Raj Giri, DipaShree Niraula | Leaveareply